Kedu mgbe Sabiha Gökçen Tavşantepe Metro Line ga-emeghe? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKedu mgbe Sabiha Gökçen Tavşantepe Metro Line ga-emeghe?
30 / 10 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
sabiha gokcen tavsantepe metro line mgbe ihe mberede
A na-ekwuwapụta na Sabiha Gökçen Tavşantepe Metro Line, nke a na-atụ anya ya nke ọma, ga-etinye ọrụ na 2020.
M4 dị ugbu a Kadıköy-Tavşantepe metro line bụ arụmọrụ a ga-ekenye Sabiha Gök Airporten Airport direction mgbe Tavsantepe ga-ejikọtara ọnụ na M10 Pendik-Sabiha Gökçen Airport Line si na Pendik na Fevzi Çakmak ebe a ga-arụ ọrụ aka na ngalaba a.
M16.03.2015 Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro line, nke a malitere iwu na 4, nọrọ na 169.500.000 € n'okpuru onye nkwekọrịta mmekorita nke Gülermak-YSE. Ogologo nke 7.5km, ikike njem njem nke 70.000 na oge njem njem 12 nke ọrụ ahụ ga-emeghe na 2020 kwuru.
Ihe Njiri ụgbọ okporo ígwè Istanbul
Emechara akara nke mbụ nke ahịrị na 1 na Kadıköy emegheworo iji rụọ ọrụ nwere ọdụ 21,7 n'akụkụ nke 16 km. Emechara usoro nke abụọ nke usoro ahụ site na owuwu nke Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik na Tavsantepe. Site na agba nke abụọ, ogologo ahịrị ahụ ruru 2 km na ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ elu rịrị elu ruo 2. Ogologo oge nke ahịrị ahụ bụ nkeji 26,5. Rozọ igwe ọkụ, nke na-amalite n'elekere 19 nke ụtụtụ, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ruo mgbe elekere 82:06.00. Kwa nkeji anọ ọ bụla, ndị njem na-echekwa oge.
okpu, KadıköyNa-amalite site, ọ na-anọ n'okporo ụzọ D100 dị na Acıbadem mpaghara ma soro ụzọ a ruo Tavsantepe. N’ahịrị ahụ, enwere ụlọ nkwakọba ihe ikike 52 (ụgbọ oloko 13) na ebe a na-arụzi ụgbọala 32 n’etiti ọdụ ụgbọ mmiri Maltepe na Nọọsụ na mpaghara Maltepe. E nyere ahịrị ahụ dum n’ime ala, tinyere ụlọ nkwakọba ihe na ebe a na-azụ ndị mmadụ.
Ọwa nke ahịrị, Kadıköy TBM n'etiti Kozyatağı na Kartal - Kaynarca; N'etiti Kozyatağı na Kartal, usoro NATM gwupụtara ya. Stanlọ ọrụ Bostancı nwere usoro okporo ụzọ ọzọ na usoro ụzọ abụọ, na-atụle mkpa maka ọrụ ọzọ. A na-ewu ọdụ ụgbọ ala ndị ọzọ niile. Stationlọ ọrụ ahụ dị mita 180 n'ogologo yana nwee usoro dabara adaba maka ọrụ ụgbọ oloko 8. Ihe owuwu a nwere ndi mmadu 259 na-ebuli elu na ndi mgbago 70. Enyere ọrụ nnweta yana ntụgharị 30, 315 n'ime ha ka enyere ndị njem nwere nkwarụ aka.
Nchebe Nchebe na Nchebe
Kadıköy - A kwadebere anwụrụ anwụrụ ọkụ na njem ndị njem maka ihe ojoo nwere ike ime na Tavsantepe Metro Line ma mee nyocha ma nwalee. Site na igwefoto 991 dị na ọdụ ndị ọrụ, ndị nche na-enyocha usoro ahụ mgbe niile, na-achịkwa ma na-enyocha ya.
Signrịba ama nke eriri ahịrị na ebe nchekwa nwere usoro nkwukọrịta ekwentị na - ejikọ aka na sistemụ Mobile Block. Usoro akara a bụ Thales CBTC na usoro ụgbọ oloko nwere ebe na-adọba ụgbọala na-enweghị ụgbọala.
A na - ahọrọ ihe niile e ji rụọ ọrụ ahịrị site na ihe ndị na - ekpo ọkụ na - ekpo ọkụ ma ghara ibunye gas na - egbu egbu. Iji hụ na ịpụpụ nke ndị njem n'oge kachasị nso na n'enweghị nsogbu ọ bụla; Ihe arụ zuru oke, karịsịa ụkpụrụ NFPA, iwu a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ngwongwo.
Kadıköy Na Tavsantepe Metro Line, a na-eme ka ike nke sistemụ ahụ sie ike site na ihe atọ dị iche iche. N'ọnọdụ ebe ntụpọ ndepụta atọ niile nwere nkwarụ, ndị na-enye ọkụ na njedebe abụọ dị iche iche na-arụ ọrụ. Site na ntinye nke ndị na-enye ọkụ, a na-ebugharị ụgbọ oloko niile n'ọwara ka ọ rute n'ụlọ ọrụ kacha nso ma nyefee ndị njem. N'ọnọdụ dị otú a nke na - enweghị ike inye ike ya na ndị na - enye ọkụ na - ada; Enwere ike inye ọkụ ọkụ na sistemụ elektrik maka awa 3 site na ntinye ike na-akwụsịtụbeghị.
Kadıköy N'ebe ọdụ ụgbọ ahụ, T3 Kadıköy - Moda Tram Line, ahịrị obodo, bọs n'oké osimiri na injin ụgbọ mmiri,
Na Ayrılık Fountain Station, Marmaray ọrụ,
Ọrụ Metrobus n'ọdụ ụgbọelu Ünalan,
N'elu Pendik Station, ị ga-agafe ụgbọ okporo ígwè PETik High Speed ​​na ụgbọ ala IETT.
Kadıköy Nkwụsị Tavsantepe
Sabiha Gökçen Tavşantepe Ụzọ ụgbọ ala
Mepee Kartal Pendik Tavsantepe Metro Line
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ga-emepe echi
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Eji Ememe Metro Emeghe
Gayrettepe 3. Mgbe ị na-emeghe ọdụ ụgbọ oloko
Kedu Ọdụm Metro ga-emeghe na Istanbul?
Mgbe imeghe kirazlı-Bakırköy İDO Metro Line?
Kedu oge bụ mmepe mmalite nke Tavşantepe Metro Station taa
Taa na akụkọ ihe mere eme: 10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ...
rakibimxnumx ọ sịrị:
Taa, ezutere m na oflọ Ọrụ Transportgbọ njem, ụlọ ọrụ na-ahụ maka maka igwu mmiri ahụ agbatịwo oge ruo 20.09.2021'e.